Trollduino: အလွန် ... အထူး Arduino ဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ် | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Trollduino: အလွန် Arduino ဘုတ်အဖွဲ့
များစွာသောတရားဝင်နှင့်သဟဇာတပြားရှိပါတယ် Arduino။ DIY ပရောဂျက်များစတင်ရန်အခြေစိုက်စခန်းရှာဖွေနေသော developer များအဖို့အဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေ။ ယခုထုတ်လုပ်သူများတွင်နောက်ထပ်ကိရိယာအသစ်တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်သိလိုစိတ်ပြင်းပြသောနာမည်ရှိသည်။ trollduino။ သို့သော်၎င်းပန်းချီကားသည်အလားတူထူးခြားသည့်အရာမဟုတ်ပါ Arduino UNO နှင့်တူညီသောပုံစံအချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘုတ်ကိုဘာကြောင့်ထူးခြားစေတာလဲလို့သင်စဉ်းစားမိရင်၊ အမှန်တရားကတော့၎င်းရဲ့အဓိကချစ်ပ်ကိုကြည့်သင့်တယ်။ Arduino နှင့်အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးဘုတ်အဖွဲ့များတွင်၎င်းသည် microcontroller (သို့) MCU ဖြစ်သော်လည်း Trollduino ၏ကိစ္စတွင်အတော်လေး အီလက်ထရွန်းနစ်လူသိများဟုတ်တယ်၊ ရိုးရိုးလေး 555 timer နေရာမှာ.
ဒါပေမယ့် ... ခဏစောင့်ပါ ဤကဲ့သို့သောအရာတကယ်ရှိပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ အပိုင်းလိုက်သွားရအောင်။ သင်သိသည့်အတိုင်း IC 555 သည် DIY ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်နိုင်ချေအမြောက်အများရှိသည့်လူသိများသော timer တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီချစ်ပ်နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကြီးသောအရာများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်လူတစ် ဦး (Mild Lee သည် Hackaday.io မှစိတ်ဝင်စားသည်ဆိုက်ဘာအာကာသမှဤသည် "အံ့သြစရာ" ဒီ Trollduino ဘုတ်နှင့်အတူတက်လာ၏။ ရပ်ရွာကို troll လုပ်ဖို့တစ်လမ်း ၎င်း၏နာမကိုအမှီဖော်ပြသည်အဖြစ်။ ထိုအထဲတွင်သူတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုရန်အဆိုပြုထား Arduino UNO ၎င်းအတွက် microcontroller ကို 555 timer ဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုရိုးရှင်းသော်လည်း၊ အစိတ်အပိုင်းများကို၎င်း၏ pins များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်အချို့သောအလုပ်များကိုပရိုဂရမ်တစ်ခုအတွက်ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ပုံတွေကတော့တကယ့်အစစ်အမှန်ပါ။ သူတို့၌သုံးပွီ ၅ ကိုပန်းကန်တစ်ခုပေါ်တွင်သူမည်သို့ထားခဲ့ပုံကိုသင်တွေ့နိုင်သည် UNO စတိုင်လ်။ ထို့အပြင်အချို့သော resistors များနှင့် capacitors များအား development board ထဲသို့ထည့်ပြီး၊ jack connector နှင့် USB connector တို့ပါ ၀ င်သည် (သင် ၅၅၅ တွင်ဒေတာအနည်းငယ်သိမ်းဆည်းနိုင်လိမ့်မည်။ ) တံသင်များအဘို့, သင်မြင်သည်အတိုင်းလည်းနှင့်အတူသဟဇာတဖြစ်ပါတယ် Arduino UNO.
Y, ဒါကဟာသတစ်ခုတောင်မှပဲအမှန်တရားကတော့ IC 555 ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့စလုပ်ချင်တဲ့သူတချို့အတွက်ကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကြီးမားသောကန့်သတ်ချက်များရှိသော်လည်း၊ အကယ်၍ သင်ကအမျိုးမျိုးသော resistors များနှင့် capacitors များတပ်ထားပါကသင်နှင့်ကစားနိုင်သည်။
သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်လုပ်နိုင်သည် အစီအစဉ်ကို download လုပ်ပါ ကြည့်ပါ ဤနေရာတွင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » Trollduino: အလွန် Arduino ဘုတ်အဖွဲ့
အမှန်မှာ ၅၅၅ (ဖြစ်နိုင်သမျှနှစ်ခုကိုမပြောတော့ပါ) မှရရှိနိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေများအားလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးကန့်သတ်ချက်ရှိသော်လည်းကန ဦး အယူအဆအရ၎င်းသည်လုံးဝမကောင်းပါ။
Servo: Arduino နှင့်အတူ servo motor ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း